EX - ABSDF: August 2013
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကြမ်းအား
ပြင်ဆင်၍ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြုနိုင်ပါက နိုင်ငံသား အစစ် မဖြစ်သူများသည် နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွင့်၊ မဲပေးခွင့် ရရှိနိုင်တော့မည်
မဟုတ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
သတင်းသမားတွေအကြိုက် လွှတ်တော်က စီစီညံညံ အသံတွေကြားနေရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ၁၉၄၇ ခုနှစ် Constitution ကို ကျောင်းမှာသင်ခဲ့ရပြီး ၁၉၇၄ Constitution နဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် Constitution ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံ ခံစားခဲ့ရတာမို့လို့ ဥပဒေပညာသင်ကြားခဲ့ရသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သုံးသပ်ဆင်ခြင် ကြည့်ရာမှာ Read more »
ရှစ်လေးလုံး ၂၅ နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ ဘကြီးလှခင် ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့ အဘ ဆိုတာက၊ ဟို “အဘ”တွေအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သိပ်ချစ်စရာကောင်းပြီး ကျနော်တို့က ဘကြီး လို့ခေါ်ကြတဲ့ အဘလှခင်အကြောင်းပါ။ ဘကြီးလှခင်က အရပ်နည်းနည်းပုတယ်၊ လက်ပြင်လည်း နည်းနည်းကိုင်းနေပြီး ကျွန်တော်စသိကတည်းက သွားတွေတော့ တော်တော်များများ မရှိရှာတော့ပါဘူး၊
အတိုက်အခံ မရှိဘဲ တစ်သွေးတည်း၊ တစ်သံတည်း၊ တစ်ခုတည်း ရှိနေလျှင် မည်သည့် အခါမှ တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းရှိလိမ့်မည် မဟုတ် ပေ။ မိမိ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုထဲမှာ ပင်လျှင် အကောင်းရော၊ အဆိုးရော၊ ဆုတ်ယုတ်မှုရော၊
တိုးတက်မှုရောအမြဲ ဒွန်တွဲနေတတ်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် အတွေ့အကြုံနှင့် လက်တွေ့ ဖြစ်ပေါ်မှု မှနေ အမှန်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
ရှင်ကြီးကိုး ရှင်ကြီးက ကျားထက်ဆိုး ဆိုသကဲ့သို့ တော်လှန်ရေးနယ်မြေသို့ အသွင်ကူးပြောင်း ရောက်ရှိလာသော ရဲဘော်များ ဘဝမှာ ထပ်မံ၍ ဖိနှိပ်ခြင်းခံကြရပြန်သည်။
အချို့အသက်ဆုံးရှုံးသွားရခြင်းတွေ လည်း ရှိသည်။ ထွက်လာရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်တွေ ဆိတ်သုန်းပျောက်ကွယ်ကုန်ကြသည်။
Karl Popper နိဒါန်း (၂၀၀၇) ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့မှာ အမုန်းတရားပေါ်ပေါက်စေသော ပြောဆိုမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ အရေးယူအပြစ်ပေးလို့ရတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တရပ်ကို ဥရောပသမဂ္ဂကောင်စီက ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးပိန်တံတား ပျက်စီးနေ၍ ဧည့်သည်များအတွက် စိုးရိမ်နေရ Read more »
ဂျပန် ၀င်ရောက်လာသော ၁၉၄၂ တွင် ကျနော် ရန်ကုန်ရောက်ပါပြီ။
အင်္ဂလိပ်များထွက်ခွာပြီးနောက် ဂျပန်တို့ ၀င်ရောက် လာသည်။ ဗိုလ်မှူးရန်နိုင်က
ကျနော်နှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ လုပ်ဖေါ်လုပ်ဖက်။ တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး ကို
ထွန်းရှိန် သူက ‘ရန်ကုန်သိမ်းပြီးပြီဗျ၊ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်က သိမ်းတာ၊ အဲဒါ
ခင်ဗျား ရန်ကုန်သွား၊ အလံပြ ဘုရားလမ်းကိုသွား၊ ပတ်ခ်ဟိုတယ်မှာ ကျနော်တို့
လူတွေရှိတယ်’ သင်္ဘောကြုံနှင့် ကျနော် ရန်ကုန်သွားသည်။ အရှေ့ အာရှ စစ်ဖြစ်သည်နှင့်
ရန်ကုန်ကို ဂျပန်တို့က ဗုံးကြဲလိုက်သည်။
ဒီခြံလေးသည် လူပေါင်းများစွာ ရဲ့ ခိုနားရာ ကွန်းခိုရာ နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည် ။ ညီအစ်မ သုံးယောက် ကနေ ပေါက်ဖွားလာကြတဲ့ မျိုးဆက်တွေရဲ့ တစ်ခုတည်းသော မှီခိုအားထားရာ နေရာလေး တစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့ဧ။် ။
မီးရှို့ဖျက်ဆီးသူများကို အရေးယူရန် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့များ လိုလား
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းများကို ရ်ိက္ခာလျှော့မည်
အလုပ်သမားများအား အလုပ်ခန့်ထားမှု ဆိုင်ရာ စာချုပ်ပျက်ကွက်ပါက အရေးယူသွားမည်
မိခင်နို့အစားထိုးအစားအသောက်များ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြဋ္ဌာန်းမည်
ကျောက်မျက် စခန်းတွင် ကျောက်မျက်အတု လိမ်ရောင်းသူ ပိုများလာဟုဆို
မြင်းခြံတွင် ဆိုလာစက်ရုံတည်ရန် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီနှင့် မူအားဖြင့် သဘောတူညီထားဟု သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ပြော
ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ် သင့်မှာဘယ်လောက်ရှိသလဲ Read more »
(Right to recall) ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့် အခွင့်အရေးလား၊ (Recalling right) အခွင့်အရေး ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခံရတာလား။ Athenian Ahnyarthar shared မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများ's photo.
အံ့ဘွယ်ကျော်နဲ့ အထဲလာလုပ်ကြည့်ပါလားဆိုတဲ့ အသုန်းအနှုန်းကို သုံးစွဲသူများသို့... ဘာတဲ့ ။ "အဝေးကနေ ပရမ်းပတာလုပ်နေ၊ ပြောနေကြမယ့်အစား၊ ခဏလေး လာလုပ်ကြည့်စမ်းပါလား" တဲ့ ။ မင်းတို့ဘ၀မေ့စကားမပြောနဲ့ ။ မင်းတို့ ခုလိုအခြေအနေ ဖြစ်လာအောင် အဝေးရောက်ရဲဘော်တွေလည်း လုပ်ခဲ့ကြတယ်ကွ ။ အေး ။ အခု အဝေးရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာ ဗမာပြည်ထဲမှာ မင်းတို့လိုပဲ လုပ်ခဲ့ကြဘူးသူတွေဆိုတာ
နားလည်ထားစမ်းပါ ။ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ် ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ် ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုယ် ဗမာပြည်ထဲကနေထွက်ခွာနေကြရတာ ။ ဘယ်သူမှ အသိုက်မြုံပျက်ခံပြီး ကိုယ့်မြေကိုယ်မစွန့်ခွာချင်ဘူးကွ ။ မင်းတို့တွေ (၈၈မျိုးဆက် အုပ်စုတွေ) ထောင် ထဲရောက်နေကြတဲ့အချိန်
မင်းတို့တွေအပေါ်လေးစား စာနာတဲ့စိတ်တွေနဲ့ အပြင်ရောက်နေတဲ့ကောင်တွေက ကိုယ်ဘာသာဇိမ်နဲ့နေရင်ရပါလျက် မင်းတို့အတွက် ရောက်ရာနေရာ ကနေ ပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတယ်ကွ
ရှစ်လေးလုံးနေ့ မြို့ထဲကို လမ်းလျှောက်ပြီး ပန်းခွေချသူ ၂ဦးကို ပုဒ်မ ၁၈ဖြင့် တရားစွဲပြန် (ရုပ်/သံ)
ပန်းတနော်တွင် မွတ်စလင် အိမ်တအိမ် ဖျက်ပေးလိုက်ရ
လားရှိုးနှင့် ကွတ်ခိုင်တွင် ရေကြီး၊ နေအိမ်များ နစ်မြှုပ်
ပုဒ်မ ၁၈ ရုပ်သိမ်းပေးရေး ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒပြ
ထီထိုးသူ များလာသောကြောင့် စက်တင်ဘာမှ စတင်ပြီး အက္ခရာတစ်လုံး တိုးရောင်းမည်
ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တစ်ပါး ကြိုးဆွဲချ၍ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်
လုပ်သား ၂၀ဝကျော် ဟုတ်ရှင်းအအေးခန်း စက်ရုံကို ဆန္ဒထုတ်ဖော်
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူတွင် ယနေ့ ၂ ကျော့ပြန်ဖမ်းဆီး နေ
ဈေးကွက်အတွင်းရှိ ရေကျိုငါးပိများ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်း ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးမည်
နည်းပညာတက္ကသိုလ်တိုင်း စာသင်နှစ်တစ်နှစ်စီ တိုးမြှင့်မည်
ဟာသရုပ်ရှင်တွေထဲက စာရေးဆရာဇာတ်ကောင်များဟာ ပေါတောတော သရုပ်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့ စိတ်ကူးတွေယဉ်ပြီး ရာဇ၀င်ဇာတ်အိမ်တည်ထားရင် နန်းဝတ်နန်းစားကြီးနဲ့၊ လျှို့ဝှက်သည်းဖိုကျပြန်တော့ လောင်းကုတ်အရှည်ကြီးဝတ် ဦးထုပ်ကြီးဆောင်း စီးကရက်ခဲထား၊ အဆိုတော်ဇာတ်ရုပ်၊
မင်းသားဇာတ်ရုပ်၊ ၀တ္ထုထဲပါလေသမျှ ဇာတ်ကောင်တွေအတိုင်း အပီအပြင် မုဒ်သွင်းလို့ ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင်အောင် ဈာန်ဝင်စားပြကြတာ တ၀ါးဝါးရယ်ရတယ် မဟုတ်လား။ ဟာသကားမို့လို ပရိသတ်ပွဲမကျကျအောင် သည်လိုပဲ အိုဗာတင်းတွေသောက်ပြီး ဟားကွက်တွေ ဖန်နေကျပဲဟာ လို့ အမြဲတမ်းတွေးခဲ့ဖူးပေမယ့် အခုတော့ အဲသလိုလည်း မဟုတ်သေးဘူးပဲ လို့ သဘောပေါက်လာပါပြီ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မဖြစ်ညစ်ကျယ်စာကလေးတွေ တောင်ရေးမြောက်ရေး ရေး သက်ကလေးရလာတော့မှ စာရေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တည်ထားတဲ့ ဇာတ်အိမ်ဇာတ်ပန္နက်ကလေး အာရုံထဲကမှိန်မသွားအောင် စာအုပ်မပြီးမချင်း မုဒ်ကလေးသွင်းပြီး ကိုယ့်စိတ်အာရုံကလေး တခြားဘက် ချော်တောငေါ့မသွားအောင် မွေးမြူထားရပါကလား လို့ သဘောပေါက်လာပါတယ်။
ရေအိုင်ထဲကျနေသော ဓာတ်ကြိုးကိုင်မိရာမှ ကလေးနှစ်ဦးသေ
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသည့်အပေါ် လွှတ်တော်အမတ် ပြစ်တင်
အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ် ၆၁ မျိုး ဒီဇိုင်းပြောင်း ပုံနှိပ်မည်
ရေတပ်စခန်း သိမ်းယူထားသော ဒလရှိ လယ်ဧက ၅ဝဝမှ လယ်သမားများကို ၁၄၄ထုတ် မောင်းနှင် (ရုပ်/သံ)
မောင်တောနယ်စပ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူ တစ်ထောင်ကျော်ရှိနေ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေး နှစ်သန်းခွဲခန့် အရပ် ပုနေ
အငြိမ်းစား ကျောင်းဆရာတစ်ဦး နေအိမ်တွင်း သေဆုံး ပုပ်ပွ
ဥက္ကံမြို့ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုမှ တရားခံများအား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်
ပြည်မြို့ မြောက်န၀င်းဆည် နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ နေအိမ် ၇၅ လုံး သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်တွင် အပြီးသတ်ဖယ်ရှားရန် အကြောင်းကြား
မခင်ဆုံး၏ ကံကြမ္မာ၊ငွေနှင့်အာဏာ တစ်နေ့ညနေ
ကိုသိန်းလက်အောက်မှာ ငွေကိုင်စာရေးလုပ်နေတဲ့ ကိုဖိုးရွှေဟာ ဘဲပေါင်းတွေကို ဆွဲချိုင့်တစ်ခုထဲ ထည့်ပြီး၊ ကိုသိန်းတို့အ်ိမ်ကိုယူလာတယ်။ ကိုသိန်းက 'ကိုဖိုးရွှေရယ်၊ ဘဲပေါင်းတွေ၊ဘာတွေကို တို့မိသားစုဟာ မကြိုက်လှပါဘူးကွာ၊ နောက်ယူမလာနဲ့၊ ကြားလား' လို့ပြောတယ်။ ဖိုးရွှေလည်း ဘဲပေါင်းကို နောက်ဖေးမှာထားခဲ့ပြီး ပြန်သွားတယ်။နောက် တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါ သလပ်ဖက် သရက်သီး၊ လက်ရွေးစင် အကောင်းစားတွေ ဆယ်နှစ်လုံးကို ဖိုးရွှေဟာ သူကိုယ်တိုင် ကိုသိန်းတို့အိမ်ကိုယူလာတယ်။ ကိုသိန်းက 'ဖိုးရွှေ၊ မင်းကိုငါပြောထားသားပဲ၊ ဒါတွေယူလာတာ ငါမကြိုက်ဖူးကွာ၊ ငါ့လက်အောက်ငယ်သားတွေက ဒီလိုပေးတာ၊ ငါမစားချင်ဘူး။ ဒါနောက်ဆုံးပဲဟေ့' လို့ပြောတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာ အစိုးရက ချမှတ်လိုက်တဲ့ပေါ်လစီတစ်ရပ်ကို စံနစ်တကျ ဆည်းပူးလေ့လာထားတဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေက အကောင်အထည်ဖော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရက ပေါ်လစီတစ်ရပ်ကို သူ့အစိုးရအဖွဲ့ (Cabinet) ကနေ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ သူ့ဝန်ထမ်းတွေက အကောင်အထည်ဖော်ရပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ဦးအား ကာအိနြေ္ဒ ပျက်ပြားအောင် ပြုလုပ်၍ အနိုင်ကျင့် စော်ကားရန် ကြိုးစားရာမှ အစပြုပြီး လူအုပ်စုဖြင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများ ဖြစ်ပွား
လုပ်ငန်းငယ် စမယ်ဆိုရင် မှတ်ပုံတင်ကြေးမယူဘဲ သုံးနှစ်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးမယ် မိုဘိုင်းလ်ဆင်းမ်ကတ်များ အရေအတွက် အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ဆက်လက်ရောင်းချမည်
August 24, 2013 at 4:46am
လူငယ်လေးတွေ နားလည် မမှားစေချင်လို့..ဒီဆောင်းပါးကိုရေးတာပါ…..
ဘယ်သူကိုမှ သာစေ ၊ နာစေလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိပါကြောင်းကြိုတင် အသိပေးပါရစေ…… အဓိကစေတနာ…က..လူငယ်လေးတွေကို..အမြင်ကျယ်စေချင်တယ်…..
ကျနော်ဖြတ်သန်းကျင်လည်ခဲ့ရာ ကရင်နီသမိုင်းနှင့် ရုပ်ပုံလွှာများကိုလည်း ထိတွေ့ခံစားမိ သလောက် ရေးသားရန် လိုအပ်မည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ ကျနော်တို့
နှလုံးအိမ်တွင် စွဲမှတ်နေသည်က ကယားပြည်နယ် ကယားလူမျိုးဟုသာ သိကြသည်။ ကရင်နီပြည်နယ် ကရင်နီလူမျိုးဟုဆိုလျှင် လူအတော်များများ ကောင်းစွာ သိရှိလိမ့်မည်ဟု မထင်။
August 24, 2013 at 7:16am
အချိန်နဲ့ တပြေးညီဆိုသလို ရုပ်ဝတ္ထုများဟာ တိုးတက်ပြောင်းလဲ နေခဲ့တယ်။ ‘ဒီတော့ ပြောင်းလဲမှုတွေ နောက် တဟုန်းထိုး လိုက်နေခဲ့ကြတယ်။ မှီတာလဲ ရှိသလို၊ မမှီဘဲနောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့တာတွေလည်း ရှိနေခဲ့တယ်။ မမှီရကောင်းလားဆိုပြီး အားမလို အားမရဖြစ်ရင်း ဘယ်သူ့ကြောင့် ဘယ်ဝါကြောင့်ဆိုတဲ့ လက်ညှိုးထိုးမှုတွေနဲ့ ခရီးဆက်နေခဲ့ကြတယ်။ ဒီလို လက်ညှိုးထိုးနေရုံနဲ့တော့ ပြဿနာကတော့ ပြီးသွားမှာမဟုတ်သလို၊ အမှီလည်း လိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အားလုံးပါဝင်ဖို့ ဒီအချိန်ဟာ အရေးအကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ လူငယ်တွေအနေနဲ့ သတိရှိရှိ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြဖို့ ရည်ရွယ်ရင်းရှိတာကြောင့် လူငယ်နဲ့ အရွေ့ဆိုတဲ့ နာမည်လေး၊ ခေါင်းစဉ်လေး အလိုလိုပေါ်ပေါက်လာတယ်။
မြန်မာ့ တပ်မတော်မှ ပထမဆုံး သမိုင်းဝင် ပြစ်မှုကြီးများ
Seaman Nayminthu shared Ye Moe's photo.
ပထမဆုံး စစ်သည် ရိက္ခာပိုတင်၍ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဏာ အလွဲသုံးစားမှု တရားခံ - ကျန်စစ်သား ဖြစ်စဉ်မှာ ပဲခူးမြို့မှ ဂျွမ်းစစ်သည်များကို ချီစစ်ဖြင့် သွားရောက်တိုက်ခိုက်ရာတွင် စစ်သည် လေးယောက်ကို စစ်သည်လေးသိန်း ဟု အထက်ဌာနအား သစ္စာမဲ့စွာ လိမ်ညာထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရ ......။
ရထားမရပ်မီ ခုန်ချသဖြင့် ခြေချော်ကာ ရထားတိုက်မိသေဆုံး
ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်တွင် ပုပ်ပွနေသော အမျိုးသားအလောင်းတွေ့
ယာဉ်စည်းကမ်း ချိုးဖောက်မှုကြောင့် အရေးယူ ခံရသော ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ခရီးသည်တင် ယာဉ်များဖြစ်နေ
မြေဈေးနှုန်းများ မြင့်မားမှုကြောင့် ရန်ကုန်-ဒလ တံတားစီမံကိန်း ရပ်နားလိုက်ရ
သြဂုတ်လ (၂၆)ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.9/No.33 သြဂုတ်လ (၂၂)ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်မြန်မာ သတင်းဂျာနယ် အမှတ် ၈၈၄
သြဂုတ်လ (၂၁)ရက်နေ့ ထုတ် Good Health ကျန်းမရေးနှင့် အလှအပဂျာနယ် အမှတ် ၄၅၀
ရန်ကုန် ရေကြီး မြို့ခံတွေ အခက်ကြုံ
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ပြီး လိုက်နာအကောင်အထည် ဖေါ်ဖို့လည်း အရေးကြီး သူငယ်တန်းကျောင်းသူ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှု ကျောင်းသားများနှင့် မသက်ဆိုင်ဟုဆို
August 22, 2013 at 8:52am
မခင်မိသည် ကမ္ဘာမကျော်သော မုဆိုးမဖြစ်သည်
မခင်မိထံတွင် အိမ်အိုလေးတစ်လုံး ဇာဘော်လီသုံးထည်နှင့် ကလေးလေးယောက်ရှိသည်
မခင်မိသည် အိမ်အိုလေးကို ပန်းချီဆရာအိုလေးထံသို့ ငွေအိုလေးသုံးသိန်းဖြင့်ရောင်းသည်
Ank Minzaw July 28 ကျနော် ၈၈ တုန်းက တွေ့တာ ကြုံတာတွေ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘေးကနေပြီးတော့ပဲ တွေ့တာများတယ်။ သူငယ်ချင်း တွေက ထဲထဲဝင်ဝင် လှုပ်ရှားကြတဲ့ သူတွေက အများကြီးပဲ။ အမျိုးအဆွေထဲမှာလည်း ထဲထဲဝင်ဝင် လှုပ်ရှားတဲ့သူ များတယ်။ ကျနော်ကတော့ ကျနော့် သဘာဝအတိုင်း အေးအေးဆေးဆေး နေတယ်။
ဘားအံတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ဆယ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားရ
အမြန်လမ်းမမှာ တောင်ပေါ်သားအဝေးပြေးကား မြောင်းထဲထိုးကျ
ဖွဲ့စည်းပုံသုံးသပ်ရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မူကြမ်း အတည်ပြု
မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့် နိုင်ငံတ၀န်း ရေကြီး
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ပိုင်ခွင့်အလွဲသုံး ပြည်သူများကို ကြိမ်းမောင်း ပြောဆို
အိန္ဒိယတွင် ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် အမျိုးသမီးတစ်ဦး အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခံရ
လေးလအတွင်း အကောက်ခွန်မဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဟန်းဆက် ကျပ် တစ်ဘီလီယံကျော်ဖိုး ဖမ်းမိ
အာရှလူနာ မြန်မာ (သို့) ကွမ်းသံသရာ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တင် ဓာတ်ပုံကြောင့် မလေးစုံတွဲကို နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်မှုဖြင့် တရားစွဲ
သမီးရည်းစားစုံတွဲ ထော်လာဂျီတိုက်မိ၍ တစ်ဦးသေ၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ
တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်က တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ ရိုးသားခြင်းဟာ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ မေတ္တာထားခြင်းပဲဆိုတဲ့ ဦးဘုန်း(ဓာတု)နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
လူတိုင်း လူတိုင်းအပေါ် မေတ္တာထားရမယ်။ လူတွေတင်မကဘူး။ သတ္တ၀ါတွေအကုန်လုံးအပေါ် ထားနိုင်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့အားလုံးအပေါ်မှာတောင် မေတ္တာထားရမှာပါ။ အဲဒီထဲမှာ လူလူချင်းမေတ္တာထားတာက
အလွယ်ဆုံးပဲ။ လူလူချင်းတောင် မေတ္တာမထားတတ်ဘူး ဆိုရင် တော်တော် ခက်နေပြီ။ လူလူချင်းက ချစ်ဖို့ အလွယ်ဆုံးပဲ။
သူကောင်းမဖြစ်ဟူသော ဆိုးရိုးကဲ့သို့ နောက်တန်းတပ်စခန်းသို့ ပြန်ရောက်ပြီး တလခန့်အကြာ ကက(ကြည်း) ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် တနယ်တကျေးသို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန် ထမ်းဆောင် ရသည်။ ဆရာကြီး ရွှေမောင်၊ ဒုတပ်ကြပ် အိုက်စံ (ရှမ်းလူမျိုး)၊ တပ်ကြပ် ဇိုဝါးနီ (ကယောလူမျိုး) နှင့် ကျနော်တို့ ခမရ(၅၃၀) (လောပိတ) သို့ ပြောင်းရွှေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ Read more »
ABSDF နဲ့ ပြည်တောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတို့ သဘောတူညီ လက်မှတ်ထိုး တိုး သစ် shared DVB TV News's photo.
ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) နဲ့ ပြည်တောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အပါအ၀င် အချက် ၄ ချက်ကို သဘောတူညီ လက်မှတ်ထိုး လိုက်ပါတယ်။
စပါးအုံးမြွေကြီး ပဲခူးမြို့နယ်တွင်တွေ့ ဖမ်းဆီးရန် ဆောင်ရွက်စဉ်လွတ် မြောက်သွား
၀မ်းတွင်းမြို.နယ်မှ လယ်ယာမြေဧက ၄၀၀၀ခန့် စိုက်ပျိုး ရေ မရလို့ အခက်တွေ့ နေ
မိုးခေါင်ရေကြီး ပျက်စီးသီးနှံများအတွက် လယ်/ဆည်ထံ မျိုးစေ့အကူအညီတောင်းခံ အတိုက်အခံဆိုသည်မှာ ဘာလဲ
ကလေးငယ်များ ကော်ရှူမှု အများဆုံး တွေ့ရသည်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ဖြစ်ကြောင်း MANA ဥက္ကဋ္ဌ ပြော
မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း လိုင်ဇာသို့ သွားရောက် ထောက်ပံ့ရန် ကေအိုင်အို လက်မခံ
တရားရုံး အခွန်များကို အဆပေါင်းများစွာ လျှော့ချရန် သဘောတူညီမှု ရရှိ
အခြေခံဥပဒေကိုပေးထားချက်ဟုယူပြီးအားလုံးလက်ခံနိုင်သည့်ဖက်ဒရယ်ဖြစ်ရေးညှိနှိုင်းသင့်ကြောင်း၊ မိမိတို့မျှော်လင့်ချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဆွေးနွေးသူ ဦးကျော်ဝင်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
Yamin Khin ဖက်ဒရယ်စနစ်၊ တိုင်းရင်းသားများ၏အခွင့်အရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ တန်းတူညီမျှခွင့်များနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားလွှတ်တော် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်စာရေးဆရာဦးကျော်ဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်များကို
လေ့လာသုံးသပ်နိုင် ပါရန် တင်ပြလိုက်ပါသည်။ မေး။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့် အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေကြမ်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ် ဆရာ့အမြင်ကို သိချင် ပါတယ်။
ဖြေ။ ကျွန်တော် လွှတ်တော်ထဲ ရောက်တာ က တစ်လသာသာပဲ ရှိသေးတယ်ဗျ။ အဲဒီ ဥပဒေကြမ်းကို ကျွန်တော် မရောက်မီကတည်း က ပြုစုနေကြတာဖြစ်မယ်။
လက်နက်များက ပြောသောနိုင်ငံရေး Win Ko shared ရုပ် ဆိုး's photo.
ခုတလော ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ လည်းဘာသာရေးပဋိပက္ခ နဲ့ ပက်သက်ပြီး စိတ်မချမ်းသာစရာတိုက်ခိုက်မှုတွေ ၊ ပုဂ္ဂိုလ် အငြိုးတေး တိုက်ပွဲတွေ နဲ့ ကိုယ့်အတွက် ဗဟုသုတ ရစရာ ၊ ခံစားမှု ပေးနိုင်တဲ့ စာရယ်လို့ မယ်မယ် ရရ မတွေ့ မိဘူး ။ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရင်း ဖေ့စ်ဘုတ်လည်း ကြာကြာသုံးဖို့ စိတ်မပါတာနဲ့ တခြားနေရာမှာ စိတ်ကူးတည့်ရာလေးတွေ လျှောက်ဖတ်နေမိတယ် ။ လျှောက်ဖတ်လိုက် တွေးလိုက်ပေါ့ ။ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ ဟာ စစ်ရဲ့ အနိဌာရုံတွေ ၊ စစ်ရဲ့ ခါးသီးတဲ့ ဒုက္ခတွေကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့ နေပါလျှက်ကယ်နဲ့ ဘာကြောင့်များ စစ်တွေ တိုက်နေကြရတာလဲ ။ Read more »
August 17, 2013 at 5:26am
ကိုယ်က ရန်ကုန်သားမို့လို့ အရေးအခင်းအကြောင်းရေးရင် ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်တွေချည့်ပဲ သရုပ်ဖော်သလို ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း တကယ်တမ်းတော့ တို့အရေးသံတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ တနံတလျားလုံး ပျံ့နှံ့သွားခဲ့တာပါ။ အညာကလူတွေနဲ့ စကားစပ်မိရင် ရွာမှာတောင် တို့အရေး ဖြစ်ခဲ့သတဲ့။ ဒီလိုဆို လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် လို့တောင် ပြောလို့ရသပ။ သူတို့အဖြစ်က ပိုတောင်ရယ်ရသေး။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေ ပြတ်တောက်ကုန်၊ တီဗီကသတင်းတွေကလည်း မယုံရတဲ့နောက် သူများအော်လို့သာ လိုက်အော်ချင်တာ ဘာတွေ အော်ရမှန်းလည်း မသိဘူး။ မြစ်နား အနောက်ဘက်ကမ်းက ရေနံချောင်းဘက်ကို “ဟေး။ သည်နေ့ ငါတို့ ဘာတွေ အော်ကြရမှာတုန်း။” လို့ လှမ်းမေး၊ ဟိုဘက် သည်ကနေ့တော့ ဒါတွေ ဒါတွေ အော်ကြရမှာ လို့ သိတော့မှ ကိုယ့်ချင်းကိုယ်ချင်း ဇာတ်ပြန်တိုက်။ တို့အရေး သုံးခါပြီးရင် အောင်ရမည် တစ်ခါ လို့ သေသေချာချာ မှာထား။ နို့မို့ လူပြက်တွေ သံချပ်ထိုးသလို လူရယ်စရာဖြစ်နေမစိုးလို့။ တောမှာ သူများအော်သလို လိုက်အော်တာမို့ အထင်တော့ မသေးနဲ့နော်။ ရွှံ့ရုပ်တော့ ရွှံ့ရုပ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကြွက်ကြောက်တယ်။
Seaman Nayminthu and3other friends shared Ye Moe's photo.
၏မြန်မာပြည်မှာ….. အမှား ကြာရင် .... အမှန် ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်…….။ Read more »
ပွဲစားများ ဈေးကစား မှုကြောင့် တိုက်ခန်းအငှား ဈေးများ လွန်စွာမြင့်တတ် နေခြင်းကို ဟန့်တားပေးစေချင်
တရားမဝင်အရက်နှင့် အခြားကုန်စည်များ ဆိပ်ကမ်းများတွင်တွေ့ရှိ
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းနှင့် ဘော်ဒါဆောင်များ တိုင်ကြားခံရပါက ပိတ်သိမ်း သည်အထိ အရေးယူမည်
ပြည်မြို့တွင် လူကုန်ကူးမှု ရုံးတင်စစ်ဆေး
နယူးဇီလန်ထုတ် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း တရုတ် ထပ်မံ ပိတ်ပင်
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်ရေး ကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနားကို မိထ္တီလာမြို့ခံများ အလိုမရှိကြောင်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ငါးပိတွင် ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာ တွေ့ရှိဟုဆို
ပြည်တွင်းဘဏ်များ ဗီဇာကတ်ထုတ်ပေး နိုင်မည့်အချိန်ကို စောင့်နေဟုဆို